Mara mma na ndị bara uru ntuziaka ntapu kọfị | Bezzia
Maria onyekwere | 06/04/2021 12:00 | Nri
Kwadebe kọfị bụụrụ ọtụtụ n'ime anyị mmemme nke oge ịtọ ụtọ na obi iru ala na-amalite n'etiti ụtụtụ ma ọ bụ etiti ehihie. Iji mee nke a, anyị nwere ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ, ịbụ akwụkwọ ntuziaka ntapu kọfị eso na taa anyị na-amam ihe kacha mma iji nweta siri kọfị ma a otutu ekpomeekpo.
Mara mma, dị irè na ikuku, Nke a bụ otu akwụkwọ ntuziaka ndị na-eme kọfị si eme ka anyị mata taa na Bezzia. Ha niile nwere nzacha nke etinyere ala kọfị na nke a na-eji aka wụsara mmiri ọkụ ma jiri iche dị iche iche mee kọfị. Melitta, Chemex ma ọ bụ Hario, ị họọrọ!
Ruo ọtụtụ narị afọ, a na-akwadebe kọfị site na ikpo kọfị kọfị n'ime ite mmiri. Ọ bụ igwe kọfị ndị a n'ụzọ ụfọdụ chebe nke ahụ bụ isi kama ọ na-eme ka ụtọ kọfị dịkwuo ụtọ. Mfe iji, ha nwekwara ọtụtụ uru karịa ụdị kọfị ndị ọzọ:
Ha na-ewe obere ohere na kichin.
Ha dị mfe ma dị mfe ịkwaga.
Ha mara mma. Ha na-ele anya nke oma na Ime ụlọ elu kichin.
Ha anaghị achọ eriri.
Ọrụ ya dị mfe
Ọdịdị ya dị mfe na-eme ka ọ dịte aka.
Ha adịghị ọnụ
4 Otu esi eme kọfị
You ma na ọ bụ onye guzobere Melitta bụ onye mepụtara nzacha kọfị na 1908? Mgbe e mesịrị, na 30s Melitta Bentz webatara conical nzacha nke ahụ mere ka kọfị dịkwuo mma site na ịmepụta mpaghara ka ukwuu maka iwepụta ya. Nzacha anyị maara taa na nke abụrụla ihe eji mara ụlọ ọrụ ahụ.
Ga-ahụ na katalọgụ Melitta plastic, iko na poselin nyo ihe ya na otutu ohuru nke n’enyeputa mmanu kọfị kwesịrị ekwesị. Na mgbakwunye, oghere ya abụọ ga-enye gị ohere ịkekọrịta ọ pleasureụ nke ị drinkingụ kọfị, ebe ị nwere ike ịkwadebe abụọ n'otu oge. Ọ gaghị efu gị ihe karịrị € 17.
Potafilters yana Melitta Pour karịrị iko carafe ka na-enye gị ohere taa ime biya kọfị n'ụzọ dị mfe ma mara mma maka otutu mmadu. Carafe bụ nke nwere iko borosilicate ma enwere ike iji ya na mmiri dị ọkụ ma ọ bụ oyi na-enweghị ihe egwu nke ịgbaji. O adabara maka ngwa ndakwa nri na ekele maka mkpuchi ya na-ewepu ya nwere ike ịsacha ya na ngwa ndakwa nri.
Ọ bụ ọkachamara n'ihe banyere mmiri ọgwụ ahụ bụ Chemex bụ onye German ọkà mmụta sayensị bụ Peter Schlumbohm mepụtara na 1941. Nzube ya dị ọcha ma dịkwa mfe Na-eme ka ọ dị mma n’elu countertop ọ bụla. Ihe nlereanya nke aka osisi na-adọrọ mmasị karịsịa, yana inye ọkụ na nhazi ahụ, ọ ga-egbochi gị ịgba ọkụ mgbe ị na-ejide iko dị ọkụ.
A na-enweta ndị na-eme kọfị ejiri aka mee nha dịgasị iche iche iji mee iko atọ ma ọ bụ iri na atọ. Na imewe nke eriri ya nzacha pụrụ iche, thicker karịa asọmpi ahụ igbochi ihe ndị na-elu ilu, mmanụ na ọka n'ime iko gị.
E hiwere Hario na Tokyo na 1921 ma mepụta ngwaahịa ngwaahịa iko maka ụlọ nyocha kemịkal. Ngwaọrụ V60 kachasị ewu ewu, Emepụtara ya iji melite portafilters ndị dị n'oge ahụ. N'iji 60º, mmiri na-aga n'etiti etiti igwe, na-agbatị oge ịkpọtụrụ.
Nke a na carafe na cone set iji mee ka kọfị a nụchara anụcha dị mma ka ọ bụrụ na, na ego ọnụ (€ 25), ị nwere ike ịnweta ihe ịchọrọ iji mee ka kọfị kọfịị ọkachamara n'ụlọ. Iji mezuo nke a, naanị ị ga-agbaso ntuziaka nke ụlọ ọrụ ahụ.
Otu esi eme kọfị
Kedu akwụkwọ ntuziaka na-atanye kọfị onye ị họọrọ, ụzọ iji kwadebe kọfị ga-yiri nnọọ dịgasị naanị ruru kọfị na mmiri dị mkpa iji nweta nsonaazụ kacha mma. Mecha nchacha na mmiri ọkụ, na-atụle kọfị kọfị nke ọka na-ajụ ma na-ekesa ya nke ọma na nza bụ usoro mbụ ị ga-eso.
Mgbe ahụ ị ga-eme ka mmiri kpoo mmiri ma wụba ya n'ime ite gooseneck. N'ihi gịnị? n'ihi na site na nke a ọ ga-adịrị gị mfe ịtinye mmiri ọkụ ahụ gafee kọfị na okirikiri site n'etiti ruo n'èzí. Ọnọdụ okpomọkụ nke mmiri ga-adịkwa mkpa; Ọ ga-adị n'etiti ogo 90 na 94. Ọ bụrụ na ịnweghị temometa, ọ ga-ezuru gị ka ị gafere 40 sekọnd mgbe ọ na-agba.
Enwere ọtụtụ vidiyo na YouTube nwere ndụmọdụ bara uru maka iji ndị na-eme kọfị na-eme akwụkwọ ntuziaka, lelee ha!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Home » Nri » Mara mma na ndị bara uru ntuziaka ntapu kọfị